डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको लागि डा. बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो आग्रह..::Leading Nepal News
डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको लागि डा. बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो आग्रह..
साउन ०३, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले स्वास्थ्य शिक्षा विद्येयक तत्काल फिर्ता लिएर राष्ट्रिय मुद्धामा सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बिहिबार डा. भट्टराईले ट्वीट गर्दै सोही मुद्धाको कार्यान्वयनको माग राख्दै अनसनरत डा.गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग समेत गरेका छन् ।
सरकारले जनतासँग मुठभेड गर्नुको साटो तत्काल सो विद्येयक फिर्ता लिएर सर्वपक्षीय सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लेखेका छन्ः ‘सरकारले जनतासंग मुठभेड गर्नुसट्टा स्वास्थ्यशिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा सर्वपक्षीय सहमति अनुरूप नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरोस् र डा के सी को जीवनऱक्षा गरोस् । ययाति आत्मष्लाघाले स्वर्गबाट तल झरेका थिए भन्ने स्मरण गरोस् ।’
सीजीको तेस्रो र चौथो लक्की ड्र सम्पन्न, विजेतालाई टीभी उपहार
काठमाडौं । सीजीले आफ्नो योजना अनुरुप लक्की ड्र गरि दुई जना भाग्यसाली विजेताको नाम छानेको छ ।लक्की ड्रमा विजेता कटारीकी रोसनी कारी र सुर्खेत कि खिमा गुरुङले सीजीको आकर्षक टीभी उपहार पाएका छन् । फेसबुक लाइभ गरि सम्पन्न गरिएको उक्त कार्यक्रममा सीजीका विभिन्न बिशिष्ट ब्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । पहिले पनि दुई जना भाग्यसाली विजेता छानिसकेको उक्त योजनामा यो भने अन्तिम लक्की ड्र रहेको र विजेताहुनेहरुले सीजीको आकर्षक टीभी पाउनेछन् ।